सहरियाको दसैं भान्सामा च्याङ्ग्राको मासु किन ‘विशेष’ भयो?
पोखरा झार्न लागिएका च्याङ्ग्रा। तस्बिरः एसके थकाली/जोमसोम
दसैंमा च्याङ्ग्राको मासु!
हिमाली भेग, (जहाँ च्याङ्ग्रा पाइन्छ)मा च्याङ्ग्राको आफ्नै नियमित काम हुन्छ। भारी बोक्ने, बोकाउने।
तर, सहरी भान्सामा च्याङ्ग्रा मासु बनेर आउँछ, त्यो पनि विशेष भएर।
र, यसको चर्चा दसैंका बेला हुन्छ। सरकारले नै खरीद गरेर आम नागरिकलाई बेच्ने चलन पहिला देखिकै हो।
नेपाली भान्सामा च्याङ्ग्राको मासु कहिलेदेखि पाक्न थाल्यो, कसरी सुरुवात भयो? यसको सुरुवाती इतिहास लगभग कतै पनि दस्तावेज छैन।
तर, पोखराको टुडिखेलमा च्याङ्ग्रा बेच्ने बजार नै लाग्थ्यो कुनै बेला।
अहिले कम्तीमा दसैंतिहारमा च्याङ्ग्रा खानुपर्छ भन्ने प्रचलन नै भइसकेको छ। कहिलेबाट च्याङ्ग्रा बेसी झार्ने र खाने प्रचलन सुरु भयो भन्न गाह्रो छ।
‘धर्म गर्न मुक्तिनाथ गएका बेला फर्किंदा ल्याउने गर्थे भन्ने अनुमान छ,’ संस्कृतिकर्मी तीर्थ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘चीनले तिब्बत अतिक्रमण गरेपछि भागेका तिब्बतीले च्याङ्ग्रा लिएर आए भन्ने पनि छ। तर ठ्याक्कै कसरी सुरु भयो भन्न सकिन्न।’
पोखरेलीले नै च्याङ्ग्राको स्वाद अरु ठाउँका बासिन्दासम्म पु¥याएको श्रेष्ठको बुझाइ छ। दसैंतिहारमा च्याङ्ग्राको मासु पोखराको विशेषता बनेको उनी बताउँछन्।
‘पहिला पोखराको टुँडिखेलमा च्याङ्ग्रा ल्याएर मोलमोलाइ गर्ने हुन्थ्यो,’ संस्कृतिकर्मी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पछि पोखरेलीहरु चितवन गए, त्यसले यहाँबाट च्याङ्ग्रा लैजाने चलन चल्न थाल्यो। बुटवल गए, त्यहाँ पनि यहाँबाटै लैजाने चलन आयो।’
काठमाडौंमा च्याङ्ग्रा पनि यसैगरी पुगेको हो।
वर्षको एकपटक दसैंतिहारमा भेडाच्याङ्ग्रा पोखरा झारिन्छ। दसैंमा भेडाच्याङ्ग्रा खानुपर्ने पोखरेलीको ‘सेड्युल’ नै बनिसकेको छ।
स्वस्थ र मासु पनि स्वादिलो हुने भएकाले भेडाच्याङ्ग्रा रुचाइने गरेको छ।
हिमाली हावापानीमा पालिने अनि जडिबुटी खाएर हुर्किएका च्याङ्ग्राको स्वादै बेग्लै!
गत वर्ष दसैंमा २५ हजारभन्दा बढी भेडा च्याङ्ग्रा पोखरा झरे। यो वर्ष त्यसको ४० प्रतिशत खपत हुने व्यवसायीको अनुमान छ। कोरोनाका कारण योबेला कुनै कार्यक्रम नभएको र च्याङ्ग्रामा पहिलेजस्तो चासो नदेखिएको व्यवसायी बताउँछन्।
मुस्ताङका निशान श्रेष्ठको दिनरात अहिले कागबेनीबाट ल्याइएका च्याङ्ग्रा कुरेर बितिरहेको छ। बेनीबाट ट्रकमा हालेर व्यापारीले पोखरा ल्याएका साढे तीन सयमध्ये ५० च्याङ्ग्राको हेरालो हुन् उनी। बाँकी तीन सय च्याङ्ग्रा पनि बिकेको छैन।
‘बेनीसम्म सात दिन लगाएर कागबेनीबाट ल्यायौं। त्यहाँबाट ट्रकमा हालेर ल्याएको आठ दिन भयो,’ उनले भने, ‘बेनीमा आठ÷दस वटा बेच्यौं। यहाँ अस्ति एउटा गयो।’ प्रतिच्याङ्ग्रा ३४ देखि ३८ हजारसम्म पर्ने श्रेष्ठले सुनाए।
पोखरामा मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, दार्चुला र तिब्बतका भेडाच्याङ्ग्रा पोखरा ल्याइने गरेको छ। २५ प्रतिशत भेडा च्याङ्ग्रा तिब्बतबाट ल्याइन्थ्यो। कोरोना संक्रमणको डरले सीमा नाकामा गरिएको कडाइले यो वर्ष तिब्बतबाट भेडा च्याङ्ग्रा आएन।
स्वदेशी उत्पादन बजारमा आए पनि माग कम रहेको खसीबोका व्यवसायी संघ कास्कीका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘पूरै झरिसकेका छैनन्। यो वर्ष आठ हजार भेडाच्याङ्ग्रा आउने अनुमान छ,’ उनले भने, ‘अहिले ६ हजार जति आइसके। केही गाडी आउँदै छन्।’
पोहोर परार स्टक रहला भन्ने हुँदैनथ्यो। लेकबाट झारिएका भेडाच्याङ्ग्रा फूलपातीसम्म सकिन्थ्यो। ‘पोहोरको तुलनामा दुई प्रतिशत पनि व्यापार छैन। यो वर्ष ल्याएको भेडाच्याङ्ग्रा रहने हो कि भन्ने चिन्ता छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने। पोखरामा यो वर्ष आठ हजार खसीबोका आउने अनुमान गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। पोखरामा नेपालगन्ज, सुर्खेत, दाङ, धनगढी लगायत ठाउँबाट खसीबोका ल्याइने गरेको छ।
हिमाली जिल्ला र तिब्बतबाट झर्नेमध्ये ८० प्रतिशत भेडाच्याङ्ग्रा पोखरामै खपत हुने गर्छ। च्याङ्ग्रा लिन कास्की, स्याङ्जा, बाग्लुङ, काठमाडौं लगायत जिल्लाका व्यवसायी मुस्ताङ पुग्ने गरेका छन्। मुस्ताङबाट हिँडाएर र ट्रकमा हालेर च्याङ्ग्रा पोखरा ल्याइने गरेको छ। ट्रकमा हालेर ल्याउँदा निस्सासिएर मर्ने भएकाले धेरैजसोले चाहिँ १० देखि १५ दिन हिँडाएरै च्याङ्ग्रा पोखरा ल्याउँछन्।
ठगिने सम्भावना पनि
भेडाच्याङ्ग्रा किन्दा ठगिने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ। भाले च्याङ्ग्रा र पोथी च्याङ्ग्राको मूल्य फरकफरक हुनुपर्ने भएकाले खरिद गर्दा लिंग पहिचानमा ध्यान दिनुपर्ने उपभोक्ता मञ्च कास्कीका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइराला बताउँछन्। मूल्य निर्धारणमा भने समस्या रहँदै आएको उनले बताए। ‘माथिबाट ल्याउँदा खरिद बिल हुन्न। व्यवसायीले भनेकै मूल्य पत्याउनुपर्ने अवस्था छ,’ कोइरालाले भने।
प्रहरी र ठाउँठाउँमा तिर्नुपर्ने करले व्यवसायी समस्यामा परेका छन्। ‘व्यवसायीसँग बुझ्दा ठाउँठाउँमा कर बुझाउँदा मूल्य एक हजारसम्म महँगो पर्छ भन्नुहुन्छ,’ कोइरालाले भने, ‘राज्यलाई एकपटक मात्रै कर तिर्ने हो। ठाउँठाउँमा तिरेर सम्भव हुँदैन।’
कसरी चिन्ने स्वस्थ भेडाच्याङ्ग्रा ?
डा. शोभा शर्मा, पशु चिकित्सक
राम्रोसँग खाइरहेको छ, टाठो देखिन्छ, रक्तअल्पता छैन भने त्यो पशु स्वस्थ छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। त्यसबाहेक राम्रोसँग हिँडिरहेको छ, नाक सुख्खा छैन भने त्यो स्वस्थ हुन्छ। तर पशुको भित्र परजिवी हुन सक्छ, अरु रोग हुनसक्छ। त्योचाहिँ जाँच गरेर नै भन्नुपर्ने हुन्छ।
देख्दा स्वस्थ देखिने कुनै पशु परीक्षण गर्दा स्वस्थ नहुने सम्भावना पनि हुन्छ। मासु जाँच ऐन अन्तर्गत पशुको पोस्टमार्टम पनि हेर्नुपर्छ। नेपालमा यसको अभ्यास भने छैन। पोस्टमार्टम गरेर, पशुको बासस्थान हेरेर उनीहरुको अंगसमेत जाँच्छौं। पशुको टाउको, फोक्सो, कलेजो सबै जाँचेर मात्र मासु खान उपयुक्त भए/नभएको पत्ता लगाउँछौं। एउटा साधारण खसी बोका किन्न जाँदा पनि हामी बाहिरी अवस्था हेर्छौं।
नेपालमा भने परीक्षण गरेर मासु खान हुने नहुने पुष्टि गर्ने चलन छैन। मासु ऐन पनि कार्यान्वयन भएको छैन। नगरपालिकाले मासु ऐन कार्यान्वयन गराउनु पर्ने हो। सो ऐनले भेटेरिनरी डाक्टरले मासु खानका लागि उचित छ भनेर पुष्टि गरेपछि मात्र बेच्न पाइने नियम छ। ऐन अनुसार मासु पसलको पनि निरीक्षण गर्छौं। दसैंमा हामीले गाउँमा गएर मासु काटेर खाने चलन रहेकोले त्यसबखत कम्तीमा स्वस्थ पशु किनेर मात्र खानु पर्छ।
कागबेनीबाट ल्याएर पोखरा नयाँबजारमा बिक्रीका लागि राखिएका च्याङ्ग्रा। तस्बिरः अनुप/आयोमेल